ရောင်းရငွေဓါတ်ပုံ - အင်တာနက်ထဲမှာငွေရှာ — Photo-Sales.com
– ကောင်းပြီ, အရာအားလုံးကိုလက်ခံနိုင်ပုံရသည်!
– Excellent က $ 100 ကိုပေးဆောင်ရသည်။
ပိုက်ဆံပေးခြင်း customer, “ ငါထို့နောက် ရောက်. စုံစမ်းခြင်းကိုခံရရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်လျှင်သင်တို့အားဟောပြောဖို့သာဖြစ်နိုင်သည်မျှော်လင့်? ဒါဟာတစ်ချိန်က လုပ်. ကိုမေ့လျော့ကြောင်းဤမျှလောက်မယ့်? ”
– ဆုံးမကိုအဘယ်သို့နှင့်မည်သို့အပေါ် မူတည်. သင်တန်း၏။
– ဟုတ်ပါတယ်! ကျွန်မက “ ရဲ့အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲကြပါစို့!” ဟုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
– ပြဿနာမရှိပါဘူး။ စကားမစပ်, အခြားအခိုက်။ ကျွန်မလျှင်ချက်ခြင်းငါပိုက်ဆံဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအကြောင်းနည်းနည်းဆပ်ဖို့သင်မေးမှမဆိုအသစ်အစီအစဉ်ကိုထုတ် run ပါပြီတော်မူမည်လော သင်တို့ကိုငါစိတ်ထဲမထားပါဘူးထင်, ငါသည်အလွန်ခဲယဉ်းလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦး trifle ဖြစ်ပါတယ်။
– သင်စိတ်ပူစရာမပါနဲ့! ငါဆိုသည်ကား, ရန်သင်တို့ဆီသို့သွားခြင်းငှါမသွားမယ် “ နောက်တဖန်ငါ့ Pay!” 😉
ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးအဝက်ဘ်ဆိုက် – ပိုအတိအကျ photobank, microstock ။
၎င်း၏အဓိက, ဝယ်လက်နှင့်ဓာတ်ပုံဆရာဓာတ်ပုံတွေအကြားကကြားခံတစ်ခုကျင်းပသည်။ နှင့်အခြားပစ္စည်းများစာရေးသူများနှင့်ဝယ်လက်များအကြား။
ဝယ်လက်ဓါတ်ပုံဓါတ်ပုံလိုအပ်တဲ့သူအယ်ဒီတာများ, ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များ, ဒီဇိုင်နာများဖြစ်ကြသည်။
Internet မှအခြားလူများရဲ့ဓါတ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်တရားစွဲတာခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ ဓါတ်ပုံများကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဆရာငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ညာဘက်ကိုဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ဖြစ်စေ။
ထိုသို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံပေါက်ပါ့မလား တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးပုံကိုလိုအပ်တဲ့အခါ, မကြာခဏကကင်မရာဝယ်အလိုရှိသောဓါတ်ပုံတွေကိုလုပ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။
သင်ကပလွေကိုဝယ်ယူလျှင်, သင်တို့သည်ပုလွေမှုတ်ရှိသည်။ သင်ကင်မရာကိုဝယ်ခဲ့လျှင်သင် – ဓာတ်ပုံဆရာ
အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်သောရိုက်ချက်များအတွက်ကင်မရာနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်ယူ? ပင်ဓါတ်ပုံတွေကိုအနည်းငယ်သောင်းချီသို့မဟုတ်ရာနှင့်ချီဘို့အလိုငှါ။
– ငါကဓာတ်ပုံဆရာပေါ့! : D
ဓါတ်ပုံရောင်းရငွေ။ ဓါတ်ပုံအားလုံးအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဖော်ပြချက်နှင့်သော့ချက်စာလုံးစာရင်းတစ်ခုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ Photobanks built-in search engine ကိုသော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်အခြေခံဓါတ်ပုံရှာဖွေနေသည်။ ငွေပေးချေမှုကိုဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ဝယ်လက်နှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုမှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံခြင်းအတွက်တစ်ဦးငွေတောင်းခံစနစ်လည်းဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုများ, drawings သို့, အားနည်းချက်ကိုရုပ်တုကို flash-clip များ, အသံသွင်းထား၏ရောင်းချခြင်း။
ဓာတ်ပုံဆရာ, အနုပညာရှင်များ, Illustrator, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့်အခြားသူများအတွက်အွန်လိုင်းဝင်ငွေ။
ဗိသုကာအတတ်ပညာ ပုံရိပ်တွေ နောက်ခံ ဓာတ်ပုံများ နောက်ခံ လှသောအဆင်း ပန်းချီ လှပမှု ပန်းချီ ပြာသော ပုံရိပ်တွေ အဆောက်အဦး ဓာတ်ပုံများ အရောင် clipart Crimea ဓါတ်ပုံ ယဉျကြေးမှု ရုပ်ပုံ နေ့ ဓာတ်ပုံများ ပတ်ဝန်းကျင် ပုံရိပ်တွေ ဥရောပ HD ကို ကျြောစောသော ဝေါလ်ပေပါကို HD သစ်တော ကားပုံ ဥယျာဉ်တော် HD ကို စိမ်းလန်းသော နောက်ခံပုံများ တောင်ကုန်း ကားပုံ သမိုင်း အတတ်ပညာ အိမ် ရုပ်ပုံ ရှုခင်း ဓာတ်ပုံများ အရွက် ရုပ်ပုံ တောင် pics သဘာဝက သဘာဝ ဟောင်းနွမ်း ကားပုံ ပြင်ပတွင် ဓါတ်ပုံ အိမ့်ပြင်တွင် ပုံရိပ်တွေ HD ကို ပန်းခြံ ပုံရိပ်တွေ HD ကို စက်ရုံ ပုံရိပ်တွေ အပင် နောက်ခံပုံများ ကြောကျ ဓာတ်ပုံများ မြင်ကွင်းတစ်ခု ရုပ်ပုံ ပင်လယ် ဝေါလ်ပေပါကို HD ရာသီ မိုးကောင်းကင် ရုပ်ပုံ ကြောကျ နောက်ခံပုံများ နွေရာသီ ပုံရိပ်တွေ HD ကို ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝေါလ်ပေပါကို HD ရဲတိုက် နောက်ခံပုံများ ငြိမ်းချမ်း ဝေါလ်ပေပါကို HD ခရီးသွား ဝေါလ်ပေပါကို HD သစ်ပင် clipart ကြည့်ရှုခြင်း နောက်ခံပုံများ ရေ နောက်ခံပုံများ
© Copyright 2nd of August 2021 09:25:38 All rights reserved Photo-Sales.com.